Abakhenkethi baseKorea bathande iGuam kwaye i-GVB yamkela abakhweli bakaT'way ngengoma
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » Abakhenkethi baseKorea bathande iGuam kwaye i-GVB yamkela abakhweli bakaT'way ngengoma
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGuam Breaking • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseMzantsi Korea • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
IGuam yamkela abatyeleli baseKorea-okokuqala emva kwe-COVID-19
I-Guam Bureau Bureau (GVB) kunye ne-AB Won Pat International Airport Authority (i-GIAA) yamkele inqwelomoya yokuqala esuka eSeoul, South Korea ngo-2021 ngorhatya lwangoMgqibelo.
Iinqwelomoya ze-B737-800 zafika zivela eSeoul, Korea, zazisa abakhweli abangama-52 kwesi siqithi.
Inqwelomoya yayiqhutywa ngu T'way, umphathi wokuqala wenqwelomoya ukuba aqhubeke nenkonzo yomoya rhoqo ngeveki eyaqala nge-31 kaJulayi.
Iinkokheli zoKhenketho ezivela kwiZiko leeNdwendwe laseGuam kunye nomculi wengingqi oncumileyo kunye nekatala yakhe bamkele abakhenkethi abafika ngenqwelomoya eT'way ukusuka eSeoul ukuya eGuam ngoMgqibelo.
IGuam yindawo yesiqithi saseMelika eMicronesia, kwiNtshona yePasifiki. Iyaziwa ngamanxweme ashushu, iilali zaseChamorro, kunye neentsika zamatye akudala. Ukubaluleka kwe-WWII ye-Guam kujongwa kwiMfazwe ePacific National Historical Park, ezineziza zayo kubandakanya i-Asan Beach, indawo eyayisakuba lidabi. Ilifa lesiqithi laseSpain lesiqithi liyabonakala eFort Nuestra Señora de la Soledad, ephezulu kwi-bluff e-Umatac.
I-T'way Air Co., Ltd., eyayisakuba yiHansung Airlines, yinqwelomoya enexabiso eliphantsi eMzantsi Korea eseSeongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul. Kwi-2018, yeyesithathu ngobukhulu eKorea enexabiso eliphantsi kwimarike yamanye amazwe, ethwele abakhweli basekhaya abazizigidi ezi-2.9 kunye nezigidi ezingama-4.2 abakhweli bamanye amazwe.
Iinqwelomoya ezininzi zizibophelele ukuhambisa iinqwelomoya ukusuka eKorea ukuya eGuam ngenyanga ka-Agasti. Umoya waseKorea uya kuqhubeka nenkonzo yomoya kwiveki elandelayo ngo-Agasti 6th ngenkonzo yomoya yeveki. UJin Air uzakuqala ngenqwelomoya kabini-ngeveki ukuqala ngo-Agasti 3 no-Agasti 6.
Sinovuyo abaphathi bethu baseKorea baphinda baqala inkonzo eGuam. Ukuzinikela kwabo lelinye inyathelo eliya phambili ekubuyiseni ishishini lezokhenketho laseGuam kunye nethuba lokubonisa umoya wethu weHafa Adai, utshilo uMongameli we-GVB kunye ne-CEO uCarl TC Gutierrez. "Siyaqhubeka nokusebenza nzima namaqabane ethu kwezorhwebo nakwezokhenketho ukubonisa inkcubeko yethu yaseChamoru kunye nokuphakamisa amava e-Destination Guam."
Ishedyuli yeenqwelomoya zaseKorea zenyanga ka-Agasti:
beenqwelo ukufika ixesha Inqwelomoya / amandla esihlalo I-Flight No. Ubuninzi
indlela NgoJulayi 31, 2021 (inqwelomoya yokuqala)
Nge-7 ka-Agasti, 14, 21, 28, 2021 11: 40 PM Izihlalo zeB737-800 / 189 TW301 1x ngeveki
Air Korea Nge-6 ka-Agasti, 13, 20, 27, 2021 1: 00 AM B777-300ER / 277 izihlalo KE111 1x ngeveki
Jin Air Nge-3 ka-Agasti, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 2021 2: 45 PM Izihlalo zeB737-800 / 189 LJ641LJ771 2x ngeveki
The Guam Bureau yeeNdwendwe (GVB) ikwacwangcise nenkonzo yemibuliso yokufika ukwamkela iindiza eziqala ngqa inyanga yonke. Iinqwelomoya ezihlanganisiweyo kulindeleke ukuba zibonelele ngezihlalo eziqikelelwa kwi-3,754 ukuya eGuam ukuphela kuka-Agasti. Zingaphezulu kwama-600 izihlalo esele zithengisiwe ukuza kuthi ga ngoku.
IGuam izama kancinci kancinci ukubuyela umva ukuba yindawo yoKhenketho eMelika kwi-East Pacific Ocean.